Barlamaanka oo maanta ka dooday Miisaaniyadda sanadka 2015-ka – Radio Muqdisho
Kulanka ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho mudaniyaasha Barlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa shir gudoominaayay guddmooiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad waxaana warbixin laga dhegeystay guddiga Maaliyadda ee Barlamaanka Soomaaliya oo gacanta ku haya Miisaaniyadda sanadka 2015-ka oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Maalliyadda Soomaaliya.
Guddoomiyaha Guddig Maalliyadda ee Barlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Suleymaan Maxamed Sheekh Daahir oo kulanka Barlamaanka ee maanta ka hadlay ayaa sheegay in guddiga uu wax ka bedel ku sameeyay Miisaaniyadda Qaranka ee sanadka 2015-ka.
Guddoomiyaha Guddiga Maalliyada ayaa sidoo kale sheegay in daraasad iyo dib u eegis ku sameeyeen Miisaaniyadda,isagoo intaa ku daray in diyaarinta Miisaaniyadda ay u baahan tahay in waqti dheer si looga baaran dego wax kasta oo ku jira Miisaaniyadda.
Intaas ka dib qaar kamid ah Mudaniyaasha golaha shacabka ayaa fikirkooda ka dhiibtay Miisaaniyadda.
Mudane Mahad Cabdalla Cawad guddoomiye ku xigeenka labaad ee Barlamaanka Soomaaliya oo kulanka maanta shir guddoominaayay ayaa gebgebadii kulanka sheegay in dooda Miisaaniyadda ay socon doonto ilaa beri ah, isagoo intaa ku daray in Barlamaanka uu u yeeray Wasiirka Maalliyadda iyo Agaasimaha guud ee Wasaaraddaas si wax looga weydiiyo Miisaaniyadda 2015-ka.